खाद्य जीवन – पहुरा समाचार
खाद्य हामी ऊर्जा पाउन जो देखि मुख्य स्रोतहरु मध्ये एक छ। छैन मात्र, हामी खाना को प्रकारको हाम्रो मन, विचार, र व्यवहार असर। भारत मा प्राचीन भनाइ छ – “खाना छ रूपमा, त्यसैले मन छ”।
भएपछि, हिमालय मा बस्ने एक महान भिक्षु थियो। मान्छे प्रेम र उहाँलाई स्वागत र उहाँले कहीं उहाँले गए निःशुल्क पहुँच थियो। यो भिक्षु भोजन दैनिक छ राजाको दरबार जाने थियो। रानी सुनको थाली र कप मा उहाँको सेवा थियो र पछि छोड्न थियो। एक दिन, भोजन पछि, उहाँले एक चाँदी ग्लास र सुनको चम्चा समाते र संग टाढा हिंडे। उहाँले पनि उहाँले तिनीहरूलाई चाहन्थे कि कुनै बताउन थिएन। यस दरबारमा छक्क थिए। को भिक्षु के भयो ”? उहाँले कहिल्यै पनि जो कोहि बताइरहेका बिना! ” तिनीहरूले आश्चर्य छ, जस्तो केहि लिएको छ। तीन दिन पछि, तिनीहरूलाई फर्के। यो पनि अधिक अलमलमा थियो।
को भिक्षु गरेको व्यवहार विश्लेषण गर्न सबै बुद्धिमानी मान्छे भनिन्छ राजा। को pundits र बुद्धिमानी मानिसहरू त्यस दिन पनि भिक्षु गर्न खुवाउनुभयो थियो के गर्न रूपमा छानबीन। तिनीहरूले dacoits देखि जफत गरिएको थियो जो केही खाना, पकाएको थियो भेट्टाए र भिक्षु गर्न सेवा र उहाँलाई हनन बनाएको!
तपाईं असर खाना ल्याउन गर्ने मान्छे को मन को स्थिति। भारत मा प्राचीन प्रार्थना मान्छे खानाको अघि गाउन छ, – यस खाना को प्रदायक खुसी होस्। किसान, को व्यापारी र खाना Cooks र यसलाई सेवा गर्ने व्यक्ति – तपाईं यो भन्न गर्दा तपाईंले तीन मान्छे को लागि समृद्धि चाहने छन्। तिनीहरूलाई को एक दुःखी छ भने पनि, हाम्रो जीवन प्रभावित हुनेछ। रसायन को बढ्दो प्रयोगले माटो को प्रजनन कम र तिनीहरूलाई ऋण अन्तर्गत राख्न कारण किसान दुखी छन्। हामी प्राकृतिक खेती को लागत-प्रभावकारी तरिका बारे तिनीहरूलाई शिक्षित गर्न आवश्यक छ। व्यापारीहरू खुसी छन् र लोभी नभइकन व्यापार भने, तिनीहरूले adulteration गर्न आवश्यक छैन। घरमा महिला आँसु बगाउन र खाना पकाउन भने, हामी यसलाई पचाउन गर्न आँसु बगाउन हुनेछ; हामी शरीर दुखाइ, टाउको दुखाइ, पेट दुखाइ, र विभिन्न रोगहरु प्राप्त हुनेछ। तसर्थ, पुरातन प्रार्थना सबै तीन आनन्द र समृद्धि इच्छा।
अर्को प्राचीन भन्दै घोषणा ‘खाद्य परमेश्वर हुनुहुन्छ’। तपाईं परमेश्वरको रूपमा खाना विचार गर्दा तपाईं आफै सामाग्री, तर सम्मान संग खान हुनेछ। हामी खाना ध्यान र सही राशि, सही समयमा सही प्रकार खान पर्छ।
मा बहस लामो बसे गरिएको छ ‘किन यो राम्रो एक शाकाहारी हुन छ’। सबै दुनिया भर मानिसको शरीर विज्ञान एक शाकाहारी आहार लागि बनाएको छ बुझ्न सुरु गरेका छन्। इन्टरनेट किन मासु खाने छैन एक आफ्नै स्वास्थ्य र वातावरण लागि राम्रो छ मा जानकारी को भरिएको छ। त्यहाँ वृत्तचित्र भेट्नुहोस् आफ्नो मासु जस्तै, बूचडखानों मा गर्न subjected छन् के उपचार जनावर उपलब्ध डरलाग्दा footages प्रशस्त छ। तिनीहरूले छिटो बढ्न र थप थोक थप्न भनेर तिनीहरूले हर्मोन संग इंजेक्शन छन्। यी सबै रसायन यो मासु खान गर्ने मान्छे को शरीर मा अन्त। तर आफ्नो सिस्टम यी रसायन लिन सक्दैन, र यो अन्ततः क्यान्सर र अन्य प्रतिरक्षा प्रणाली विकार नेतृत्व। यी पशुहरू देखि दूध पनि विषाक्त छ र उपभोक्ताहरु ‘शरीर विज्ञान द्वारा अस्वीकार गरिएको छ। वास्तवमा, मासु खाने वालों बीच lactose घृणाको को अवस्थामा र रोगहरु को ठूलो संख्या के शाकाहारी आन्दोलन जन्म दिए थियो। मनन र Pranayama आयुर्वेद संग संयुक्त पुरातन भारतीय विज्ञान 5,000-8,000 वर्ष पुरानो छ। यो राम्रो स्वास्थ्य र पुस्ताका भलाई को लागि जिम्मेवार छ।
सबै परिवर्तनहरू आफैलाई सुरु छ। जब तपाईं खान, तपाईं यसलाई आफ्नो शरीर भित्र बस्नुहुन्छ कि ईश्वरीय गर्न पेशकश गर्दै छन् भनेर नबिर्सनुहोस्। त्यसैले, आफ्नो खाना आदर सही खान र स्वस्थ रहनुहोस्।
← एड शीरन, फेम सम्मान के सॉंगराइटर्स हॉल करने के लिए बच्चे को चेहरे
पोस्ट लागि परीक्षण →
Copyright © 2020 पहुरा समाचार. All rights reserved.